कोरोनाको असर : लोकप्रिय टिभी सिरियल ‘बालिका वधु’का निर्देशक ठेलामा तरकारी बेच्दै Canada Nepal
असारमा हिउँद पुग्न सक्छ, पञ्चाङ्ग संशोधन गर्नुपर्ने कुरा किन उठेको हो ?
फ्रान्सलाई आतङ्कित पार्नेगरी फेरि भएको चक्कु प्रहारको घटना के हो ?
दुःख दिने भनेको शनि मान्छेको मित्र कि शत्रु ? साढे सात दशाले दिन्छ यस्तो फाइदा
शनिवार सबै कार्यहरूमा सफलता सुनिश्चित गर्न अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय
क्यानाडानेपाल डेस्क आश्विन १२ २०७७
आश्विन १२, २०७७ सोमवार १७:१६:२७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। साउथ फिल्म सामूहिक रूपमा दक्षिण भारतको पाँच अलग फिल्म उद्योगहरूको सगोलमा चिनिन्छ। जसमा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ र तुलु फिल्म उद्योगहरूको समावेशीकरण रहेको छ। यी सबै फिल्म उद्योगका एकल इकाईहरु चेन्नई, हैदराबाद, कोची, बेंगलुरु, म्याङलोर र त्रिवेंद्रममा अवस्थित् छन्।
यद्यपि लामो समय देखि एक फिल्म उद्योगको रुपमा विकसित भएपनि कलाकारहरु आफुलाई बलिउडमा स्थापित गर्न पाउँदा आफ्नो भाग्य उदय भएको मान्ने गर्छन्।
जान्नुहोस् साउथ फिल्मबाट आफ्नो करियर शुरु गर्ने बलिउडका चर्चित अभिनेत्री
१. प्रियंका चोपडा : बलिउड देखि हलिउडसम्म नाम कमाउन सफल अभिनेत्री हुन्, प्रियंका चोपडा । तर बलिउडमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि साउथबाट उनले आफ्नो फिल्मको करियर शुरु गरेकी थिइन्। उनले सन् २००२ को तमिल फिल्म थामिझामबाट आफ्नो अभिनय शुरु गरेकी थिइन्।
२. एश्वर्या राय बच्चन : एक समयकी मिस वर्ल्ड एश्वर्या राय बच्चनले पनि आफ्नो फिल्मी करियर साउथ फिल्मबाट गरेकी थिइन्। उनले सन् १९९७को मनिरत्नमबाट निर्देशित फिल्म इरुवरबाट आफ्नो बलिउड यात्रा तय गरेकी थिइन्।
३. दीपिका पादुकोण : बलिउड देखि हलिउडसम्म नाम कमाउन सफल अभिनेत्री हुन्, दिपिका पादुकोण। उनले बलिउडका सुपरस्टार साहरुख खानसँग ओम शान्ति ओममा जोडी बनाएर बलिउडमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न सफल भएकी थिइन्। तर, एक समय उनले आफ्नो करियर साउथ फिल्मबाट सुरुगरेकी थिइन्। उनले सन् २००६ मा कन्नड फिल्म ऐश्वर्यामा अभिनय गरेकी थिइन्।
४. इलियाना डी क्रुज : इलियानाले पनि बलिउड प्रवेश गर्नु भन्दा अघि साउथ फिल्ममा काम गरेकी थिइन्। उनले सन् २००६ मा तेलगु फिल्म देवदासुबाट आफ्नो अभिनय क्षेत्रलाई सुरुवात गरेकी थिइन्।
५. यामी गौतम :गौताम यस्ती अभिनेत्री जसले आफ्नो करियर विज्ञापनबाट सुरु गरेकी हुन्। विज्ञापनबाट सुरु गरेकी उनि अहिले बलिउडमा एक स्थापित नाम हुन्। उनले पनि आफ्नो पहिलो फिल्म साउथबाट गरेकी थिइन्। उनले कन्नड फिल्म उल्लास उत्साहबाट अभिनय सुरु गरेकी थिइन्।
६. श्रीदेवी : बलिउडको एक चर्चित नाम हो, श्रीदेवी। अभिनयले मात्रै हैन आफ्नो अन्दाज र नृत्यले लाखौंको मुटुमा बस्न सफल अभिनेत्री श्रीदेवीले पनि आफ्नो करियर साउथ फिल्मबाट गरेकी थिइन्। उनले सन् १९६७ देखि आफ्नो अभिनय क्षमता प्रस्तुत् गर्दै आएकी छिन्। शुरुवाती दिनमा उनले बालकलाकारको भूमिकाबाट आफ्नो अभिनय सुरु गरेकी थिइन्।
७. कृति सेनन : बलिउडमा प्रवेशमा गर्नु भन्दा अघि कृति सेननले आफ्नो करियर साउथ फिल्मबाटै गरेकी थिइन्। उनले साउथका चर्चित अभिनेता महेश बाबुसँग काम गर्ने मौका पाएकी थिइन्। दुवै अभिनेताले अभिनय गरेको उक्त फिल्म अहिले पनि लोकप्रिय छ। सो फिल्मको नाम हो नेनोक्कादीन र यसको बजेट ७० करोड भारतीय रुपैंया रहेको थियो।
८. हेमा मालिनी : कुनै समय बलिउडकी ड्रिम गर्ल भनेर चिनिने हेमा मालिनीले पनि आफ्नो अभिनयको सुरुवात साउथ चलचित्रबाट गरेकी थिइन्। उनले सन् १९६ ३को साउथ फिल्म इधु सथियमबाट आफ्नो अभिनय करियर सुरु गरेकी हुन्।
९. तपसी पन्नु : अहिले बलिउडमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न सफल अभिनेत्री हुन्, तपसी पन्नु। उनले बलिउडका सर्वोकृष्ट अभिनेताहरु सँग पनि काम गरिसकेकी छिन्। उनले आफ्नो करियरको सुरुवातमा सन् २०१० मा साउथको फिल्म जुमाण्डी नादनबाट गरेकी थिइन्।
१०. रेखा : हिन्दी सिनेमा जगतमा इभरग्रिन अभिनेत्री हुन्, रेखा। बलिउड करियरमा दर्जनौँ सुपरहिट चलचित्र दिएकी रेखाले आफ्नो करियरको सुरुवात साउथ फिल्मबाट गरेकी थिइन्। उनको सो फिल्मको नाम थियो, अपरेशन ज्याकपट नल्ली सीआइडी।
११. दिशा पटानी : बलिउडमा आफ्नो अभिनय क्षमताका साथ साथै आफ्नो रुपले लाखौँ दर्शकलाई घायल बनाउन सफल दिशाले पनि आफ्नो करियरको सुरुवात साउथको फिल्मबाट गरेकी थिइन्। उनले पहिलो साउथ फिल्म थियो, लोफर। यस फिल्ममा सफलता हाँसिल गरेपछि उनले एम.एस धोनी फिल्म पाएकी हुन्।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार १८:४९:३० बजे : प्रकाशित
# साउथ फिल्म
बलिउड अभिनेत्री काजल अग्रवाल आज बिहे गर्दै
काठमाडौं । बलिउड तथा दक्षिण भारतीय फिल्मकी अभिनेत्री काजल अग्रवाल आज वैवाहिक जीवन बाँधिँदैछिन् । उनले प्रेमी गौतम किचलुसँग बिहे गर्न लागेकी हुन् ।
कोभिड महामारीका कारण सीमित पारिवारिक जमघटका बीच काजलको बिहे हुँदैछ । काजलले अक्टोबर ६ मा आफूले विवाह गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
काजोलको मेहेन्दी कार्यक्रम बिहीबार आयोजना गरिएको थियो । बलिउडमा चलचित्र ‘सिंघम’मा काम गरेपछि काजलको चर्चा चुलिएको थियो । साउथमा भने उनी निकै चर्चित छिन् ।
कार्तिक १४, २०७७ शुक्रवार १२:१७:३७ बजे : प्रकाशित
# काजल अग्रवाल
# बलिउड अभिनेत्री
काठमाडौं - बलिउड अभिनेत्री मालवी मल्होत्रामाथि चक्कु प्रहार भएके छ् । सोमबार बेलुका अभिनेत्री मालवी चक्कु प्रहार भएको हो । चक्कु प्रहारबाट घाइते भएकी उनको मुम्बईस्थित कोकिलाबेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उनीमाथि मुम्बईको बर्सोवा क्षेत्रमा चक्कु प्रहार भएको हो। अभिनेत्री मालवीले आफूमाथि चक्कु प्रहार गर्ने प्रोड्यूसर योगेश मालवी रहेको बताएकी छिन् ।
आफूसँग विवाह गर्न नमानेको आरोपमा योगेश मालवीले चक्कु प्रहार गरेको अभिनेत्री मालवीको आरोप छ । योगेश उनका फेसबुकका साथि हुन् ।
घटनापछि मालवीले भनिन् - ५ मिनेट टाढा कफी पसल थियो, त्यहाँबाट म फर्किरहेकी थिएँ। त्यसपछि अचानक योगेश आफ्नो कारबाट आएर मसँग कुरा गर्न खोजे। त्यसपछि उसले मलाई आफ्नो कार तिर लाग्यो र चक्कु प्रहार गर्यो।
वास्तवमा ऊ मेरो अनुहारमा आक्रमण गर्न चाहान्थ्यो तर मैले उसको अनुहारमा हात राखिदिए। उसको स्क्वायर मेरो दाहिने हातमा थियो। त्यसपछि म भुइँमा लोटे पछि केही व्यक्ति मेरो सहयोगका लागि आए र मलाई अस्पताल लगे।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार २०:३८:४२ बजे : प्रकाशित
# मालवी मल्होत्रा
एउटै फिल्मको यति धेरै पारिश्रमिक लिन्छन् महेश बाबू, कति छ सम्पत्ति ?
काठमाडौं - साउथ फिल्मका चर्चित अभिनेता हुन् महेश बाबु । १९७९ मा कमियो नीडा मा बालकलाकारको भुमिका निभाएर अभिनय शुरु गरेका उनी नयाँ फिल्मका कारण मात्र नभई सामाजिक कार्यबाट पनि चर्चामा आइरहने गर्छन् ।
यसैबीच हालै उनले बाढी पिडितका लागि ठुलो रकम सहयोग गरेर चर्चामा आएका थिए । हालसम्म धेरै फिल्ममा अभिनय गरिसकेका उनका धेरै प्रशंसकहरू छन् ।
भारतिय मिडियाका अनुसार उनी दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योगका सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक बुझ्ने अभिनेता पनि हुन् ।
उनले एक फिल्ममा काम गरेको २० देखि २२ करोडसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छन् । उनका हरेक फिल्मले बक्सअफिसमा राम्रो व्यापार पनि गरेका छन् । फिल्ममा उनको लुक्स, अभिनय र स्टाइल धेरैले रुचाउने गर्छन् ।
भारतिय मिडियाका अनुसार उनको १५० करोडभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको छ । उनलाई साउथ सुपरस्टार रजनीकान्त धेरै नै मनपर्ने गर्छ ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार १९:४३:४१ बजे : प्रकाशित
# महेश बाबू
श्रद्धा कपूर नागिन बन्दै
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् श्रद्धा कपूर । सन् २०१० को फिल्म ुतीन पत्तीु बाट अभिनय यात्रा शुरु गरेकी श्रद्धाले हालसम्म धेरै फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
भारतिय मिडियाका अनुसार उनी फेरि ठूलो पर्दामा देखिदैछिन् । फिल्ममा उनी पहिलो पटक नागिनको भूमिकामा देखिने बताइएको छ । विशाल फुरियाले निर्देशन गर्ने फिल्म नागिन मा उनले इच्छाधारी नगिन बन्न लागेकी हुन् ।
आफू इच्छाधारी नगिन बन्न लागेको बारे उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएकी हुन् । प्रेमकथामा आधारित रहने यस फिल्मको कथा मनपरेपछि उनले फिल्म साइन गरेकी हुन् ।
उनले यस फिल्मलाई लिएर आफू उत्साहित भएको बताएकी छिन् । यसअघि पनि ८० को दशकमा श्रीदेवीले नागिन बनेर सबैको मन जितेकी थिइन् ।
फिल्मलाई निखिल द्विवेदी, विशाल फुरिया र सैफरान ब्राडकास्ट तीनजना मिलेर बनाउन लागेको भारतिय मिडियाका बताइएको छ ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार १३:२३:०५ बजे : प्रकाशित
अभिनेत्री काजल अग्रवालको विवाह भोलि हुँदै, को हुन् बेहुला ?
काठमाडौं - साउथ फिल्म तथा बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री काजल अग्रवालको विवाह भोलि अर्थात ३० अक्टोबरमा हुँदैछ । काजलको परिवारले उनलाई मिल्दो बेहुला व्यवसायी गौतम किचलूलाई खोजेका छन् ।
व्यवसायी गौतम किचलूसँग काजलले भोलि मुम्बईमा विवाह गर्दैछिन् । काजलको घरमा अहिले विवाहको धमाधम तयारी भइरहेको छ । कोरोनाभाइरसको जोखिम अवस्थामान विवाहमा नजिकको आफन्त, साथीहरू मात्र बोलाइने बताइएको छ ।
काजलले विवाहपछि पनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन् । विवाहको कार्यक्रम दुई दिन चल्ने बताइएको छ ।
बलिउडमा फिल्म 'क्यों हो गया ना' बाट डेब्यू गरेकी उनी पछि साउथ फिल्ममा लागेकी थिइन् । उनले हालसम्म धेरै फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
कार्तिक १३, २०७७ बिहिवार १२:०८:१८ बजे : प्रकाशित